Calaamadaha qoraalka: calaamadaha qoraalka ugu fiican iyo sifooyinkooda | Hal-abuurka khadka tooska ah
calaamado qoraal ah
Nerea Morcillo | 22/04/2022 13:11 | Design Graphic, General
Haddii aan ka hadalno aqoonsiga shirkadda ama naqshadeynta sumadda, waxaan ogaanay sida ay calaamaduhu u kobceen suuqa iyada oo ay uga mahadcelinayaan naqshadahooda. Waa wax caadi ah in la arko calaamado noocyo kala duwan leh.
Laakiin gaar ahaan, waa in aan xoogga saarno kuwa taariikhda u galay qoraalkooda. Doorashada daabacaadda wanaagsan ama shaqeyntu waxay ka kooban tahay 90% guusha aqoonsiga qaybta naqshadeynta.
Taasi waa sababta, qoraalkan, Waxaan ka hadleynaa nooca calaamadaha noocaan ah iyo sifooyinka ay soo bandhigaan. Sidoo kale, dhamaadka boostada waxaan soo jeedin doonaa qaar ka mid ah qalabka ugu fiican si aad u awoodo in aad adigu sameysid.
1 Calaamadaha qoraalka: maxay yihiin
1.1.1 Samee fududee
1.1.2 Noqo mid asal ah oo hal abuur leh
1.1.3 muhiim ka dhig
2 Calaamadaha qoraalka ugu fiican
2.3 lagu iibiyo
3 Barnaamijyada ugufiican
Calaamadaha qoraalka: maxay yihiin
Xigasho: Suuqgeynta Tooska ah
Marka aan ka hadalno naqshadaha qoraalka, waxaan tixraacnaa naqshadeynta sumadda oo si buuxda u go'aamisay hal nooc ama dhowr nooc. Waxaa muhiim ah in la tixgeliyo dhinacan maadaama xulashada wanaagsan ee qoraallada ay ku habboon tahay guusheeda.
Caadi ahaan waa calaamado inta badan lagu garto yaraantooda iyo nuxurkooda fudud. Taasi waa sababta ay uga soocaan inta kale oo ay ku kala duwan yihiin naqshadooda. Hoosta, waxaan ku tusineynaa qaar ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan ee ay tahay inaan ku xisaabtano markaan naqshadeyno calaamad.
Fududnaanta waxay la mid tahay shaqeynta naqshadeynta. Sidaa darteed, had iyo jeer waxaa lagula talinayaa in la sameeyo naqshad sida ugu fudud ee suurtogalka ah. Wax kasta oo wasakhayn kara sawirka summadaada, waa muhiim inaan ogaano sida loo beddelo mar kasta iyo habkan oo kaliya kuwa walxaha matalaya calaamadda oo dhan ayaa hadhay.
Isku day in aad wax ka barato, baaro oo aad doorato qoraal si fudud loo garan karo, loo akhrin karo oo wakiil ka ah, qaabka uu u egyahay ama muuqiisa awgeed, balse haddii uu yahay mid ku shaqaynaya habka uu wax u sheego.
Noqo mid asal ah oo hal abuur leh
Hal-abuurku waa aasaas oo aad u go'aan qaadasho leh haddii aan ka hadalno naqshad ka bilaabma eber. Si kastaba ha ahaatee, brand ah oo loo tixgeliyo asalka, waa astaan ​​aan hore loo arag oo buuxisa sifada calaamad u gaar ah.
Xaqiiqda fudud ee ogaanshaha in calaamaddu tahay mid asal ah, waxay u dhigeysaa hab aad u wanaagsan suuqa. Intaa waxaa dheer, cilmu-nafsiga sawirka, waxaa la sheegaa in calaamad aan horay loo arag ay aad uga fududahay in la xasuusto marka loo eego mid aan maalin walba sawirno.
muhiim ka dhig
Shaqada calaamadaynta waa shay aad u adag oo adag haddii aan ka hadalno inaan helno guul sii jirta sannado badan. Laakiin wax waliba waxay leeyihiin khiyaanadooda oo markan khiyaamadu waa dadaalka. Naqshadeeye cilmi baaris ku sameeya hal sano wuxuu heli doonaa natiijo ka wanaagsan naqshadeeyaha kaas oo sameeyay cilmi baaris kaliya seddex bilood.
Taasi waa sababta mashruuc kasta oo aan fulinayno uu muhiim u yahay, oo uu la socdo, natiijada ka dambeysa. Waxaan kugula talineynaa inaadan dejin waxa ugu horreeya ee aad hesho oo aad sii socoto. U deji xadka iyo caqabadaha. Waxay u noqon doontaa sida ugu fiican guulahaaga.
Calaamadaha qoraalka ugu fiican
Nooca caanka ah ee cabitaannada fudud ayaa ku baahsan adduunka oo aan waligood si fiican loo sheegin. Oo ma ahayn sababta oo ah sida badeecadeeda loo iibiyey, taas oo sidoo kale muhiim ah in la xoojiyo, laakiin sidoo kale sababtoo ah calaamadda iyo naqshadda la isticmaalay ayaa taariikhda gashay.
Astaantu waxa ay ka samaysan tahay weji nooca loo yaqaan far ama qoraal.. Waxay ilaalisaa muuqaalka demure inkastoo ay tahay calaamad cabitaan fudud. Intaa waxaa dheer, wax sidoo kale tilmaamaya waa midabkiisa cas. Waxay leedahay kala duwanaansho u gaar ah, oo ay weheliso qoraalkeeda, waxay noqotay mid ka mid ah noocyada ugu muhiimsan ee suuqyada lagu isticmaalo.
Haddii aan ka guurno qaybta cabitaanka oo aan u gudubno qaybta tifaftirka badan ama adduunka moodada casriga ah, waxaan ogaanay in Vogue ay sidoo kale adeegsatay naqshad qoraal ah sumaddeeda. Joornaalka caanka ah ee caanka ah ayaa hoos u galay taariikhda ma aha oo kaliya sababtoo ah naqshadeynta majaladaha, laakiin sababta oo ah calaamaddeeda, sababtoo ah demur iyo muuqaal rasmi ah. Waji farmaajo fudud oo tilmaamaya dhammaan raaxada oo calaamad u ah ka hor iyo ka dib warshadaha moodada.
Cadillac waa calaamad baabuur oo ku taxan mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee ugu sarreeya. Astaantiisu waxa ay tilmaamaysaa mid kasta oo ka mid ah sifooyinka ay baabuurtoodu leeyihiin: raaxada, xirfadda, tayada iyo lacagta badan ee ku jirta mid kasta oo baabuurkiisa ah.. Tani waa sida ay u go'aansadeen in ay naqshadeeyaan calaamad, oo ay weheliso farta farta lagu qoray ee farta ku qoran, u suurtagashay in ay ururiyaan qaar ka mid ah dhinacyada ugu badan.
Shaki la'aan, waxay yihiin naqshado si aad ah ugu guulaystey warshadaha baabuurta, sababtaas awgeed, waxay heleen aqoonsi wanaagsan.
Mid kale oo ka mid ah calaamadaha ama calaamadaha aan ku dhicin liiskan waa Yahoo. browser-ka caanka ah ee internetka ayaa laga aqoonsaday caalamka oo dhan madal su'aalo ah oo la yaab leh. Sida golahaagu u ahaa, sidoo kale nakhshadeynta summadaaduna waa u leedahay.
Naqshad fudud, oo leh qoraal wareegsan oo nool. Laakiin had iyo jeer ilaalinta sifooyinka ku jira qoraalkeeda. Midabkeeda guduudan ayaa si aad u wanaagsan ula socday qoraalkiisa mar walba, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah noocyada ama naqshadaha ugu shaqeeya, shaki la'aan.
Waanu ka bixi kari waynay buugga caanka ah ee Disney, calaamad ka buuxa sixir, khiyaali, animation iyo meel ay ku noqdaan wiil ama gabar mar kale. Shaki la'aan, nashqada calaamadeeda waxay u hoggaansamaysaa sawirka uu Walt Disney rabay inuu bixiyo dadwaynaha.
Mar kasta oo calaamadda caanka ah ay ka soo muuqato shaashadaha, waanu dhoola cadeyneynaa in ay qayb ka ahayd caruurnimadayada sanado badan. Waa mid ka mid ah sifooyinka ka dhigaya mid ka mid ah naqshadaha ugu fiican ee warshadaha filimada, muddada dheer. Yaa aan rabin in uu mar kale ilmo noqdo?
Waanu ka tagi kari waynay qalabkaas si aanu liiska u bilowno. Waa mid ka mid ah aaladaha ama software-ka ka tirsan Adobe. Mana aha in ay tahay aaladda xiddiga, laakiin waa ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu naqshadeeyo calaamadahaaga. Waxay leedahay qalab taxane ah oo ka dhigaya doorashada ugu fiican.
Adigoo awood u leh inaad la shaqeyso vectors, waxaad u naqshadeyn kartaa dhammaan siyaabaha suurtogalka ah iyo wax kasta oo aad rabto. Intaa waxaa dheer, waxaa mar hore lagu go'aamiyay default by liiska fonts ama baakadaha kuwaas oo aad ka bilaabi kartaa in ay ku shaqeeyaan ama naqshadeynta aad.
Hubaal inaad hore u maqashay Canva. Waa mid ka mid ah fursadaha xorta ah ee bilowga naqshadeeyayaasha iyo naqshadeeyayaasha. Waxay leedahay habab kala duwan oo aad ugu shaqeyn karto naqshadahaaga hab raaxo leh.
Dhibaatada kaliya ayaa ah in marka la shaqeynayo qaar ka mid ah naqshadahooda, Waxaan heli karnaa noocyo hore u diiwaan gashan oo la mid ah ama la mid ah kuwayada, taas oo meesha ka saaraysa asalka iyo hal-abuurka habka naqshadaynta. Waxa kale oo aad naqshadayn kartaa waxyaabo kale oo tifaftiran sida kaararka ganacsiga iwm.
Placeit waa qalab kale oo isna aad faa'iido u lahaa intii lagu jiray habka naqshadaynta astaanta. Waa madal online ah oo aad marin u heli karto ma aha oo kaliya naqshadeynta logo, laakiin sidoo kale naqshadeynta qaar ka mid ah majaajilada, naqshadaynta internetka ee nuxurka qaarkood ama shabakadaha bulshada, ama xitaa tafatirka fiidiyowga.
Waa mid ka mid ah qalabka ugu dhammaystiran ee kaa caawin doona inaad bilowdo. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale leedahay qayb bilaash ah ama beta, taas oo macnaheedu yahay ka sahlan oo bilaash ah halkaas oo aad si dhakhso ah u samayn karto naqshadahaaga.
Ma aha ikhtiyaarka ugu habboon in la naqshadeeyo calaamad, laakiin sidoo kale waxay leedahay suurtogalnimada in sidaas la sameeyo. In kasta oo aynaan la shaqaynayn vectors, taas oo ka dhigaysa aqoonsiga shaqada mid aad u adag, sidoo kale waa suurtogal in la abuuro oo sidoo kale loo rogo PNG si loogu daro habkan lacagaha kale ee dulsaarka.
Waa mid kale oo ka mid ah software-ka ama codsiyada ka mid ah Adobe, iyo, inkastoo ay cilladaha naqshadeynta aqoonsiga, waxay sidoo kale leedahay doorkeeda marka la eego qalabkeeda. Maadaama ay leedahay qalab tafatir oo kala duwan iyo burush.
Naqshadeeyayaal aad iyo aad u badan ayaa ku sharmaaya nashqada noocaan ah ee calaamadahooda. Calaamadaha qoraalka ayaa taariikhda u galay sida fartoodu tahay. Waxa in yar oo aan ka warqabin ay tahay waxa farta fudud ay ku gudbin karto naqshadeena ama maskaxdeena.
Sababtan awgeed, naqshadeynta sidoo kale waa dhinac nafsi ah, haddii aan ku guuleysanno inaan gaarno dhagaystayaasheenna bartilmaameedka ah, waxay noqon karaan guul dhammaystiran, ama liddi ku ah, masiibo dhamaystiran. Marka la soo koobo, waxaan rajeyneynaa in aad wax badan ka baratay calaamadaha iyo naqshadaha noocaan ah, oo aad ku dhiirato in aad adigu naqshadeyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » calaamado qoraal ah